महाकुलुङ गाँउपालिकाद्वारा ६५२ घरदुरी नागरिकहरुलाई राहत वितरण - Jerung Films
wwwjerungfilmswwwjerungfilms 11 May 2020
राज कुमार राई,२८,बैशाख– काठमाण्डौं । महाकुलुङ गाँउपालिकाले जिल्लाबाहिर रहेका ६५२ घरदुरी आफ्ना नागरिकहरुलाई राहत वितरण गरेको छ । विश्व महामारीको रुपमा फैलिएका कोरोना कहर लामो समय लकडाउनले राजधानीमा विचल्ली बनाएका आफ्ना सबै वडाका नागरिकहरुलाई गाँउपालिकाले राहत वितरण गरेको हो । गाँउपालिका अध्यक्ष सागर किराँतीको नेतृत्वमा राजधानी काठमाण्डौं आएर राहत वितरण टोलीले प्रति परिवार १ बोरा चामल, ४ केजी दाल,१ लिटर तेल राहतको रुपमा आईतबार वितरण गरेका हुन् ।
राहत पाए पछि काठमाण्डौमा रहेका महाकुलुङ बासीहरुले निकै खुशी महशुस गरेका छन् । महाकुलुङ गाउँपालिकाले राजधानी काठमाण्डौंको धुम्ब्राही,कपन,गोर्क जगदोल,नयाँबस्ती,कोटेस्वर,बानियाटार लगायतका विभन्न बस्तीहरुमा राहत बाँडेको छ । नेपाल सरकारले बाँडेको राहत कसैले पाँच किलो थापेको र कसैले केही पनि नपाएको अवस्थामा महाकुलुङ गाँपालिकाले सोचेको भन्दा राम्रो र गुणस्तरयुक्त राहत दिदा वडा बासी निकै खुशी भएका छन् ।
अहिले सम्म काठमाण्डौं नगरपालिकाले पाँच किलो चामल र दुई किलो दाल मात्र दिएको आफ्नो आँखाले देखेको बताउदै प्रत्यक्ष दर्शीको रुपमा रहेका अरु जिल्ला बासीहरुले पनि महाकुलुङ गाउँपालिकाको प्रशंसा गरेका छन् । कुनै पनि स्थानीय तहले हाल सम्म नगरेको काम महाकुलुङ गाँउपालिकाले गरेको भन्दै काठमाण्डौं नगरपालिकाबासी समेत चकित भएका थिए । यो भन्दा अगाडी अत्ति समस्यामा परेकाहरुलाई उद्धार गरी पालिकाकै खर्चमा गाउँ लगिएपछि बाँकी काठमाण्डौंमा नै बस्न बाध्य भएकाहरुलाई खोजीखोजी सबैलाई सजिलो पर्ने ठाउँमा राहत दिएको हो ।
गाउँपालिकाको प्रशासनिक खर्च तथा जनप्रतिनिधिहरुको एक महिनाको पारिश्रमिक र प्रशासन कर्मचारीहरुको केही दिनको तलब,विभिन्न वडाका अध्यक्ष तथा कर्मचारीहरुको तलब समेत राहतकोषमा जम्मा गरि राहत वितरण गरिएको गाउँपाकिा प्रमुख सागर किराँतीले बताए । राहत कोषमा वडा नं ३ का अध्यक्ष डेक बहादुर राईले तीन महिनाको आफ्नो पारिश्रमिक जम्मा गरेर उदाहरणीय कार्य गरेका हुन् । राहत साच्किैको पीडित र दुखीहरुको हातमा पुग्न सकुन भनेर पालिका कर्मचारी सहितको टोली लिएर आफूहरु काठमाण्डौं आएको किराँतीको भनाई थियो ।
साथै राहत वितरण तथा आफ्नो नागरिकहरुलाई गाउँ फर्काउन ओहोरात्री रुपमा खटेर सहयोग गर्ने स्वयंमसेवक तथा विभिन्न समाजसेवी बुद्धीजीवि सबैलाई धन्यबाद दिन चाहको पनि अध्यक्ष किराँतीले बताए । महाकुलुङ गाँउपालिकाको तर्फबाट राहत वितरण तथा समन्वय कर्ताको रुपमा गाउँपालिका अध्यक्ष सागर किराती, प्रमूख प्रशासकीय अधिकृत, लबुन राई, २ नं वडा अध्यक्ष प्रदिप कुलुङ,लेखा अधिकृत, नारायण काजी बस्नेत,पशुपन्छी सेवा शाखा प्रमूख, डा. बिर्खराज कुलुङ,लगायतका टोलीहरु काठमाण्डौं आएका हुन् ।
गाँउपालिकाको संमन्वयमा केन्द्रबाट दिलिपसिंह कुलुङ प्रेम कुलुङ,कुमार जीत कुलुङ शरद, कान्छामान कुलुङ, टार्जन कुलुङ,गणेश कुलुङ ,संकल्प किराती, शुक्रमणि कुलुङ,विकास कुलुङ,कुमार वि.क. नेत्र कुलुङ,अभि कुलुङ लगायतले स्वयंमसेवकको रुपमा रहेर महत्वपूर्ण भुमिका निभाएका थिए । आफूहरु आफ्नो नागरिकहरुको उद्धार कार्यको लागि एउटा स्वयंमसेवकको रुपमा रहेर काम गर्न पाउदा साह्रै खुशी महशुस भएको पर्यटन व्यावसायी तथा समाजसेवी दिलिप सिहं कुलुङले कलाखबरसँग बताए ।
यो आपतकालीन अवस्थामा गाउँपालिकाले स्रहानीय काम गरेर जनताको भावनालाई जितेको बताउदै गाउँपालिका लगायत संवस्यमसेवक साथीहरुलाई पनि धन्यबाद दिन चाहान्छु कुलुङले भन्नु भयो । शान्तीपूर्ण वातारणमा कुनै भेदभाव रहित वितरण गरिएको राहत साँच्चिकैको राहत हो जस्तो महशुस गर्न सकिने थियो । केही व्यक्तिहरुले भने नियम बिपरीत एउटै परिवारमा तीन चारपटक सम्म राहत थाप्ने कोसिस गरेका थिए । सो कुरा थाहा पाएपछि स्वयंमसेवकहरुले केही कडाई गरेका थिए ।